Espaniôla tsy misy petra-bola Bonus Casino - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
Posted on Novambra 13, 2018 Author Andrew	Comments Off amin'ny Spain No Deposit Casino Bonus
Ireo Casinos an-tserasera izay manaiky ireo mpilalao klioba avy any Espaina dia miha-tombo hatrany ny sarin'izy ireo, mahomby amin'ny fitandremana vola sy ny fampiroboroboana. Ho an'ny mpilalao tsirairay izay mipetraka any Espaina ary mitady ny itokisana ao amin'ny klioba, dia nanao safidy iray an'ny GRAB amin'ny filokana espaniola tsara indrindra isika! Betsaka ny isan'ny mpamatsy fandaharana maro an'isa amin'izany trano izany ho an'ireo mpilalao amin'ny filokana espaniola, na izany aza aorian'ny fampisehoana ao amin'ny klioba espaniola, dia hiditra ao anatin'ireo klioba espaniola tsara indrindra ianao izay mampiasa fotsiny ny fandaharana espaniola tsara indrindra omena. Ireo trano espaniola ara-dalàna indrindra amin'ny Internet dia nandinika sy nisedra talohan'ny voarakitra an'ity tranokala ity, ho an'ny fametrahana haingana sy ny mpanjifa mahay manamarina isan'andro, isan'andro. Ny fihaonan'ny klioba filokana amin'izy ireo dia mifanaraka amin'ny mpilalao iray ao amin'ny clubhouse avy any Espaina.
Ny miaraka amin'ny tranonkala amin'ny tranonkala manaiky ny mpilalao baolina ES rehetra, dia mamela ireo mpilalao monina ao Espaina mba hikarakarana sy hanao milina an-tserasera an-tserasera na tabilao sy fialan-tsasatra amin'ny olona miaina amin'ny klioba. Eto ianao dia hahita ny karazana fitantanana maimaimpoana maimaim-poana izay hanampy anao amin'ny fitadiavana ny tombon-tsoa amin'ny filokana Espaniola.
Ireo Casinos rehetra amin'ny teny Espaniôla miaraka aminy dia ahitana ny:
Fiatoana sy fandrosoana tsara
Ny tsara indrindra sy matanjaka isan'andro, isan'andro ny mpanjifa manohana ny mpandahateny Espaniôla
Fepetra momban'ny fiarovana sy azo antoka!
Ny lanjany Espaniola dia mampiasa ny fandaharana natao sy nahazoan-dàlana avy amin'ny fanavaozana azo itokisana ary manome anao izay rehetra ilainao ao amin'ny club iray amin'ny aterineto.
Ny klioba ara-batana Espaniôla dia manaisotra pejy iray amin'ny bokin'ireo mpifaninana an-tserasera amin'ny alàlan'ny fanolorana valisoa ho an'ny mpivarotra voalohany.
Grupo Ballesteros dia nanambara ny herinandro lasa izay fa nanolotra ny tolotra tokana miavaka ao amin'ny Gran Casino de La Mancha, izay fantatra amin'ny anarana hoe Casino de Illescas, any Toledo, Espana.
Ballesteros tamin'izany fotoana izany ny tompon'ny ampahany lehibe tao amin'ny klioba misy tantara telo, izay nanokatra ny fidinan'ny herintaona tsy hay herintaona, na dia teo am-piandohana aza dia nisafidy ny hividy ny mpilalao madinika Juan José Sánchez Colilla sy ny Shinoa nasionalin'i Zhou Ye Haiguan.
Mba hiderana, ny trano club club dia nametraka ny mpanjifany karazana fotoana voafetra fantatra kokoa amin'ny toerana filokana mifototra amin'ny tranonkala noho ny seho lalao an-tanety. Raha ny tatitra iray navoakan'ny gazety Espaniola Azarplus, dia mampanantena ny klioba filokana fa hahazo valisoa 20% amin'ny mpivarotra vola ambaniny hatramin'ny 250 € ny mpitsidika azy, tsy miraharaha firy raha milalao toerana izy ireo na manova ny latabatra.
Grupo Ballesteros dia miasa eo amin'ny lalantsara bingo am-polony any Espana ary nahazo alalana hitantana bingo sy trano fandraisam-bahiny an-tserasera amin'ny sehatry ny fandraharahana mifototra amin'ny tranokala ao Espana amin'ny alàlan'ny eBingo.es, izay miara-miasa hatrany amin'ny bingo telo lehibe indrindra eto an-toerana mpitantana: Grupo Ballesteros, Grupo Coves ary Bingos Reunidos.
Ny tranokalan'ny eBingo dia manana fironana omni-channel ankehitriny, satria ny valisoa amin'ny Internet dia azo ambara amin'ny iray amin'ireo faritra telo mifototra amin'ny faritany bingo. Na izany na tsy izany, mazava ho azy, Grupo Ballesteros dia nisafidy ireo singa mahazatra mahazatra an-tserasera izay mety hanana ho avy koa eo amin'ny tontolon'ny lalao ara-batana.
Na dia eo aza ny asany Espaniola, Grupo Ballasteros dia miasa ihany koa ny fisokafana sy ny bingo asa any Venezoelà, izay misy ny fikambanana efa akaiky ny fotoana lava be.
Fikambanana mpiloka ao Espaina
Ny klioba filokana any Espana dia tsy ara-dalàna raha tsy tamin'ny 1977. Talohan'izay dia loteria fototra ihany no navela. Hatramin'ny nanasaziana ny klioba tany Espana dia nanjary nalaza be izy ireo. Ankehitriny dia misy klioba filokana milanja mihoatra ny 60 manerana ny firenena. Ny klioban'ny filokana any Espana dia lazain'ny fanjakana, na izany aza tsy miankina ny ankamaroany. Mifindra isaky ny distrika ny adidy, nefa mandeha amin'ny 55% amin'ny vola miditra marobe, ankoatry ny fandaniana amin'ny tombotsoan'ny orinasa. Noho izany, manodidina ny 66% amin'ny klioba espaniola dia tsy misy tombony azo tombanana sisa tavela amin'ny eritreritra.
Ny fanovana mitohy amin'ny lalàna espaniola tamin'ny taona 2012 dia niteraka fifandrafiana bebe kokoa tamin'ny alàlan'ny famelana ny clubhouse an-tserasera nahazo alàlana ara-dalàna hiasa. Antenaina ihany koa ny sehatra ara-batana izay hiaina fihoaram-pefy lehibe rehefa mikasa ny hamolavola toeram-pivarotana lehibe antsoina hoe Eurovegas ny mpitsikilo amerikana Sheldon Adelson. Na izany aza, ny mpamatsy vola filokana dia nandatsaka ny volavolany tamin'ny desambra 2013, taorian'ny fifandonana tamin'ny manam-pahaizana momba ny manodidina noho ny fanombanana sy ny fanaovana ankivy ny fifohana sigara tao amin'ny clubhouse.
Casinos an-tserasera any Espaina
Ny lalàna 13 / 2011 amin'ny Gambling dia nanokatra ny lalana ho an'ireo mpitantana an-tserasera mba hampitsahatra ny lalàna nomena azy tany Espaina tamin'ny 2012 tamin'ny volana Jona. Fikambanana marobe no naka ny fahafahana handefa ny iray amin'ny tranonkala tsara fanahy ao amin'ny aterineto, izay misy ampahany manan-danja amin'ny sehatra virtoaly.
Mandra-pahatongan'ny Jolay 2014, ny tranonkala club Espaniôla dia navela hanolotra roulette, poker, bingo, blackjack, ary baccarat, na izany aza, voafetra ny habaka. Raha izany, dia nizara torolàlana vaovao ny governemanta espaniola ankehitriny ary nahitana fialamboly ny habaka sy ny fivarotana varotra amin'ny fidirana amin'ny fitantanana ara-barotra amin'ny Internet. Espaniola tsy misy banky deposit casino
Ny rafi-pitantanana espaniôla - Dirección General de Ordenación del Juego - dia mahazo fangatahana fahazoan-dàlana ankehitriny ary miankina amin'ny fe-potoana maharitra antsasaky ny taona ny fomba fitantanan-draharaha miaraka amin'ireo fialamboly habaka an-tserasera nahazo alalana espaniola izay velona manomboka ny 1 Janoary 2015.
Na dia mitsidika ireo trano fandraisam-bahiny ireo aza ny mpilalao Espaniôla maro, dia mbola mbola fantatra amin'ny ankamaroan'izy ireo ivelan'ny klioban'ny mpilalao gambling izay manolotra ny monty feno.
145 manafaka tombony tsy petra-bola ao amin'ny Cashmio Casino
70 maimaim-poana ao amin'ny TouchLucky spins Casino Casino
30 tsy misy petra-bola amin'ny Inter Casino tombony Casino
45 maimaim-poana ny casino ao amin'ny Platinum Reels Casino
75 tsy misy petra-bola amin'ny Star tombony Casino
25 manafaka Casino tombony tsy petra-bola ao amin'ny BitStarz Casino
70 maimaim-poana ao amin'ny Circus.be spins Casino Casino
30 maimaim-poana ao amin'ny RoyalPanda spins tombony Casino
20 tsy misy petra-bola amin'ny EuroMaxPlay Casino tombony Casino
115 maimaim-poana ao amin'ny Mandarin spins tombony Palace Casino
125 spins Casino tombony maimaim-poana ao amin'ny Diamond7 Casino
15 maimaim-poana ao amin'ny Polder spins tombony Casino
130 manafaka tombony tsy petra-bola ao amin'ny GoldClub Casino
130 spins maimaim-poana ao amin'ny GrandGames Casino
135 spins Casino tombony maimaim-poana ao amin'ny Silk Casino
70 maimaim-poana spins Casino tombony amin'ny Vics Bingo Casino
95 spins Casino tombony maimaim-poana ao amin'ny 21Prive Casino
170 tsy misy petra-bola amin'ny Amsterdams Casino tombony Casino
30 tsy misy petra-bola amin'ny Epoca tombony Casino
65 spins maimaim-poana ao amin'ny AllBritish Casino
155 maimaim-poana amin'ny Play spins Casino Hippo Casino
60 maimaim-poana ao amin'ny Betsafe spins tombony Casino
1 Fikambanana mpiloka ao Espaina
2 Casinos an-tserasera any Espaina
5 Tsy misy fehezan-dalàna kisendrasendra: